Xisbiyada Siyaasadda oo loogu hanjabay in shahaadada lagala noqonayo | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Xisbiyada Siyaasadda oo loogu hanjabay in shahaadada lagala noqonayo
Guddoomiyaha Guddiga Madaxa banaan ee doorashooyinka Qaran Xaliim Ismaaciil (Xaliima Yarey) ayaa ugu baaqday Xisbiyada siyaasadda ee is-diiwaan geliyay inay hey’adahooda dhisaan, isla markaana xafiisyadooda ay noqdaan kuwo aragti iyo kala dambeyn leh.
Waxaa ay sheegtay in Xisbigii loo arki in aanu xafiis laheyn ama aan u dhameystirneyn qaab dhismeedkiisa ay kala noqonayaan shahaadada xafiiska.
“Xisbiyada waxaa laga rabaa sida ay hey’adahooda u dhisan yihiin inay dowlad u soo dhisana, hadaad xisbigaaga ku fashilanto oo aan xafiis laheyn, kuraas laheyn iyo kala dambeyn, kaas waxay caddeyn u tahay in dowlad aan waxeedu caddeyn inuu keenayo, waana looga digaa shacabka in aysan nagu soo dooran”ayay tiri Xaliima Yarey.
Waxaa ay sheegtay in dhowaan baaritaan ku sameyn doonaan Xisbiyada is diiwaan geliyay xarumahooda iyo xafiisyadooda, isla markaana xisbigii ay u arkaan in aanu waxba u dhameystirneyn lagala noqon doono shahaadada aqoonsiga.
Illaa 15 Xisbi ayaa iska diiwaan geliyay Guddiga doorashooyinka madaxa banaan, waxaana xisbiyada qaar ay u badan yihiin kuwo shaqsi ama labo qof kaliya ka kooban.
Doorashada lagu wado in dalka ka dhacdo sanadka 2020 ayaa la filayaa inay noqoto nidaamka xisbiyada oo dadka ay dooranayaan, waxaana xisbiyada laga doonayaa inay xubno dheeli tiran ku yeeshaan qabaa’ilada si la mid ah nidaamka uu hadda ku dhisan yahay baarlamaanka oo xisbi walba ay xubin ka noqdaan dhamaan beelaha Soomaaliyeed.